၂၀၁၉ ခုနှစ်သြဂုတ် ၉ ရက်၊ (၁၉၉၉) - နီကိုးလ် Prause အဆိုကိုပယ်ချရန်အဆိုပြုချက်ကို Don Hilton မှ ၂၁ မျက်နှာပါသောတုံ့ပြန်မှု - ပြပွဲ၏စာမျက်နှာ ၅၇ မျက်နှာပါ - Your Brain On Porn
9ဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၉ - Don Hilton မှ ၂၁ မျက်နှာပါသော Nicole Prause အဆိုကိုပယ်ချရန် (ပြပွဲ၏စာမျက်နှာ ၅၇ ခုပါ ၀ င်သည့်) တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှု။
Nicole R. Prause က Donald Hilton ကိုသူမအပေါ်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုကိုပယ်ချရန်အဆိုပြုချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ပယ်ချရန် Prause ၏အဆိုတွင်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအထောက်အထားများပါရှိသည်။ Don Hilton သည် ၂၁ မျက်နှာပါသောအတိုက်အခံဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော screenshots များ) နှင့်သူ၏ updated ကြေငြာခြင်းအပါအဝင်ထောက်ပံ့ပြပွဲ၏ 57 စာမကျြနှာ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှေးခယျြထားကောက်နှုတ်ချက်).
Download လုပ်နိုင် PDF ကို - သြဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၉ - ၂၁ မျက်နှာရှိ Donald Hilton သည် Nicole Prause ၏အသရေဖျက်မှုကိုပယ်ချရန်အဆိုကိုဆန့်ကျင်သည် se နှုန်း အမှု။
Download လုပ်နိုင် PDF ဖိုင်ရယူရန် - ၂၀၁၉ ခုနှစ်သြဂုတ် ၉ ရက် - ပယ်နယ်ပယ်အားပယ်ရှားရန်အဆိုကို Donald Hilton ၏ ၂၁ မျက်နှာပါသောအတိုက်အခံနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ပြသမှု ၅၇ မျက်နှာပါ
ဤသူတို့အားအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအပေါငျးတို့သ gory အသေးစိတ်စာမျက်နှာများ (နှင့် Prause ၏အခြားသားကောင်များအနေဖြင့်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာ) ကိုကြည့်ပါ:
မေလ, 2019: Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုဖိုင်များကို se နှုန်း Nicole R Prause & Liberos LLC အားတရားစွဲဆိုမှု။
ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဂျွန်အဒယ်လာ၊ MD ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု.
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဂယ်ရီ Wilson ကကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် R Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု။
ထိုအစာမကျြနှာ၏ကဏ္ဍများအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ် - စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ2- နီကိုးလ်ပရပ်စ်တွင် Donald Hilton MD ကိုအသရေဖျက်မှုသမိုင်းရှိသည်။
Don Hilton ၏အခြား Prause ခံရသူ ၉ ဦး ၏ကျမ်းကျိန်လွှာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်သည် Prause ရေခဲစိုင်၏အစမျှသာဖြစ်သည်။ သူမ၏သားကောင်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းတွင်သုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ, ကုထုံး, စိတ်ပညာရှင်ဟောင်း UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး, ဗြိတိန်ပရဟိတ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း.
နီကိုးလ် Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအန္တရာယ်ရှိစွာအသုံးပြုခြင်း
porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com") (နီကိုးလ် Prause, မာတီ Klein, Lynn Comella, ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Ley, အမ်မလီအက်ဖ် Rothman, ရှမွေလသည်ပယ်ရီ, တေလာ Kohut ဝီလျံ Fisher က, ပတေရုဖင်လန်, Janniko Georgiadis, အဲရ Janssen, Aleksandar Štulhofer, ယောရှု Grubbs ဂျိမ်းစ် Cantor မိုက်ကယ် Seto, Justin Lehmiller, ဗစ်တိုးရီးယား Hartmann ဂျူလီယာ Velten, ရော်ဂျာ Libby, Doug Braun-Harvey, ဒါဝိဒ်သည် Hersh, ဂျနီဖာ Valli, ဂျိုး Kort ။ )
၏ screenshots Donald Hilton ၏ ၂၁ မျက်နှာရှိသော Nicole Prause ၏အသရေဖျက်မှုကိုပယ်ချရန်အဆိုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် se နှုန်း အမှု။ (သြဂုတ်လ 9, 2019)
သင်နှင့်အတူတစ်လျှောက်လိုကျလြှောကျနိုငျ Donald ဟီလ်တန်၏ပြပွဲများ၏ PDF ကို.
အသစ်တင်ထားသော Don Hilton ကြေငြာချက် (ပြပွဲ A) - ၏ပထမစာမျက်နှာ ၁၀ မျက်နှာဖြစ်သည် Prause ၏ပယ်ချခြင်းကိုအဆိုကို Don Hilton ၏ ၂၁ မျက်နှာပါသောဆန့်ကျင်မှုနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ပြပွဲ၏ ၅၇ မျက်နှာပါ PDF: